कम्प्युटर कढ़ाई - यो के हो? कसरी बनाउने? यसको कति खर्च हुन्छ? कसरी अनुमान गर्ने?
कम्प्युटर कढ़ाई लुगा सजाउने क्लासिक र सबै भन्दा राम्रो तरीका हो। यो थ्रेडको प्रयोगको साथ एक शिलालेख, प्रतीक वा लोगोटाइपलाई इम्ड्रोयरिंगमा समाहित गर्दछ र कम्प्युटर-नियन्त्रित मेशीन जसले आज हस्तकलालाई प्रतिस्थापन गरेको छ।
हामी शाब्दिक केहि र लगभग केहि पनि कढ़ाई गर्न सक्दछौं। कम्प्युटर कढ़ाई सफलतापूर्वक सबै प्रकारका कपडाहरूमा प्रयोग गरीन्छ, अद्वितीय कर्पोरेट कपडा सिर्जना गर्दछ। कम्पनीका कर्मचारीहरूले लगाएको यो कपडाले यसको पहिचान, ब्रान्ड र समुदायको भावना निर्माण गर्दछ। सबै कर्मचारीहरू, यस्तै वर्दीमा फुटबलरहरू, एक टोलीमा खेल्छन्।
कम्प्युटर कढ़ाई सफलतापूर्वक ग्याजेटहरू र विज्ञापन कपडा बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कढ़ाई लोगो र कम्पनी नाम टी-शर्ट र स्वेटशर्टमा ग्राहकहरूको लागि राम्रो उपहार हुनसक्दछ। हाम्रो प्रमोशनल कपडा लगाएर, तिनीहरूले हाम्रो ब्रान्डको प्रचार गर्नेछन्।
यद्यपि कम्प्युटर कढ़ाई कपडामा मात्र प्रयोग हुँदैन। तपाइँ कम्प्युटर द्वारा एम्ब्रोइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्याप्स, झोला, तौलिया, bathrobes र workwear.
कढ़ाई लोगो र शिलालेखहरू सजिलै हटाउन योग्य र पेलेबल समकक्षहरू भन्दा नियमित रूपमा डिकेल जस्ता कपडामा चिपकाइएको भन्दा धेरै टिकाऊ हुन्छन्।
कम्प्युटर कढ़ाई - विज्ञापन कपडामा मुद्रणको इतिहास
पहिले नै पुरातनतामा, महिलाले हातले कपडा र टेक्लोलोथमा कढ़ाई नमूनाहरू।
कढ़ाई तिनीहरू प्रायः संस्कृतिको तत्व हुन्छन् र दिइएको क्षेत्र र राष्ट्रको प्रतीक हुन्छन्। प्रख्यात काशुबियन वा हाईलैंडर कढ़ाई सम्झनको लागि यो पर्याप्त छ, जुन लोक पोशाकको एक अविभाज्य तत्व हो।
यस तरिकाबाट भीडबाट बाहिर निस्कन, साथ साथै ग्राफिक रूपमा व्यक्तिहरूको टोली पहिचान गर्न, मार्केटि and र PR विशेषज्ञहरू द्वारा छिटो प्रयोग गरियो। उपयुक्त चयन गरिएको पोशाकमा लुगा लगाएका कर्मचारीलाई ग्राहकले फरक व्यवहार गर्दछ। उदाहरण को लागी, पाइलटहरु, पुलिसहरु र सैनिकहरु लाई आफ्नो सुरुचिपूर्ण वर्दी मा सम्मान गरीन्छ, अन्य उद्योगहरु मा कामदारहरु लाई बिभिन्न र विशिष्ट संगठनहरु मा बिभिन्न भिन्न देखिन्छ। त्यसकारण धेरै कम्पनीहरूले अद्वितीय पोशाकमा लगानी गर्ने निर्णय गरे। यसका लागि धन्यबाद, उनीहरूका कामदारहरूले एक समूहको रूपमा महसुस गर्न सक्दछन्, समान उद्देश्यको लागि सँगै खेल्दै।
कढ़ाईको मतलब पनि ग्याजेटहरू र विज्ञापन कपडा। सबैलाई उपहार, फ्रीबीज वा पुरस्कार मन पर्छ। यदि उसले एक झोला, क्याप वा कम्पनीको प्रतीकको साथ टी-शर्ट पायो भने उसले निश्चित रुपमा यसलाई लगाउँदछ, यसैले ब्रान्डको विज्ञापन गर्दछ।
आर्थिक विकास र भूमण्डलीकरण हरेक वर्ष कढ़ाईको लागि माग बढ्यो। भाग्यवस, कम्प्युटर प्रविधिको प्रगतिले अवसरहरूको अभिव्यक्त बृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको छ। हाल, कपडा र सामानका विभिन्न प्रकारका शिलालेखहरू र ढाँचाहरू अब छिटो, सटीक, सटीक, दोहोरिने योग्य र सस्तो हो। आज, हजारौं एम्ब्रुइडरीहरू कुनै समस्या बिना नै गर्न सकिन्छ र थोरै समयमा पनि सबैभन्दा ठूलो अपेक्षाहरू पूरा गर्न।
कसरी कम्प्युटर कढ़ाई बनाउन?
कम्प्युटर कढ़ाई - कपडामा इम्रोइडरिंग शिलालेखहरूको प्रविधि
आधुनिक मेशिनहरु दर्जनौं सुई र विभिन्न र of्ग को धागा संग सुसज्जित छन्। सिलाई प्रक्रिया एक कम्प्युटर प्रोग्राम द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ। अपलोड गरिएको डिजाइनमा आधारित, मेशिनले उपयुक्त अक्षर र आकारहरू सिलाई।
कसरी कढ़ाई, प्याचहरू डिजाइन गर्ने
यो कुन ठाउँ वा वस्तुको स्थानहरूमा निर्णय गर्न पर्याप्त छ जुन तपाइँ कढ़ाई हुन चाहनुहुन्छ। थप रूपमा, यसको डिजाइन र आकार छनौट हुनुपर्छ। प्राय: जसो उपयुक्त टाइपफेसका साथ शिलालेखहरू र कम्पनीहरू र संस्थाहरूका लोगोहरू मुद्रित हुन्छन्। ढाँचा अर्डरको साथ पठाउनुपर्दछ, र हाम्रा विशेषज्ञहरूले यसलाई कम्प्युटर सिलाई मेसिनको आवश्यकताहरू अनुकूल गर्न मद्दत गर्दछ।
कम्प्यूटर भरतका फाइदाहरू
बाहिरी रूप भनेको यस्तो चीज हो जुन कढ़ाई प्रतीकको साथ कपडा बाहिर देखिन्छ। ध्यानपूर्वक बनाएको कढ़ाईले चीजलाई नयाँ गुण दिन्छ। यो स्पर्श को लागी महसुस गरिएको छ, मात्र स्टाइलिश। कम्प्युटर कढ़ाईले कपडा र सामान शैली र भव्यता दिन्छ, र यसको विज्ञापन गरिएको ब्रान्ड प्रतिष्ठामा बढ्छ। दुई टी-शर्टहरू कल्पना गर्नुहोस्, एउटा ध्यानपूर्वक एम्ब्रोइड गरिएको कम्पनी लोगोको साथ र अर्को विज्ञापन पन्नी यसमा अड्किएर। यस्तो छविले प्लाष्टिक र सस्तो मिति पछाडि सुरुचिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण मर्सिडीजको अंशलाई मनमा राख्छ।
फलस्वरूप, कम्प्युटर कढ़ाई को स्थायित्व यसको प्रतिस्पर्धी को भन्दा अतुलनीय छ। इम्ब्रुइडरीमा लगभग समान टिकावपन छ जुन कपडाले यसलाई सजाउँछन्। चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन कि प्रतीक वा शिलालेख धुलाई वा इस्त्रीमा पील हुन्छ। कम्प्युटर कढ़ाई कपडाको अभिन्न अंग हो, र एक सजीलो हटाउन योग्य, गैर-स्थायी सहायक मात्र होईन जसको उपस्थिति द्रुत रूपमा गिरावट आउँदछ।
कम्प्युटर कढ़ाई लगभग कुनै र colorको हुन सक्छ। केवल सीमितता प्रयोग गरिएको थ्रेडको रंग हो। कम्प्युटर नियन्त्रणको लागि शल्य चिकित्सा सटीक धन्यवादको साथ एम्ब्रोइडरिंग प्रदर्शन गरिन्छ।
कढ़ाई अत्यधिक निजीकृत गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर टेक्नोलोजीले ढाँचा, प्रतीकहरू र शिलालेखहरूको सटीक, दोहोरिने योग्य र उच्च-रिजोलुसनको लागि अनुमति दिन्छ।
उच्च मात्राको साथ, कढ़ाई केवल आर्थिक रूपमा भुक्तान गर्दछ। यसको मूल्य अपेक्षाकृत कम छ, यसले सबै प्रकारको कपडा - शर्ट, टी-शर्ट, पोलो, प्यान्ट, सर्ट - साथै टावल, टोपी र झोला सजाउनेको लागि आदर्श बनाउँछ।
सामान्य, पूर्ण-सतह कम्प्युटर प्रिन्टिंगको विपरित, असीमित र color्ग प्यालेटको साथ पूर्ण छविलाई कढ़ाई गर्न असम्भव छ। यद्यपि यो सबै कुराको बारेमा हो। कढ़ाई परम्पराको सन्दर्भ हो, बड़प्पनको प्रतीक, किनकि यो उच्च समाजको लुगा सजाउने हतियारको कोटसँग सम्बन्धित छ। यो कित्स्ची, रंगीन र रमाइलो चित्रकलाहरु को लागी केहि छैन।
कम आधारमा तौलको साथ कम गुणस्तरको कपडामा कम्प्युटर कढ़ाई गर्न सकिदैन। यो मानिन्छ कि कपडाको व्याकरण १०० g / m भन्दा बढी हुनु पर्छ2। यद्यपि, सस्तो टि-शर्ट यति पातलो छ कि यस मार्फत सबै कुरा देखाउँदछ कि कढ़ाई लोगो कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ।
कम्प्युटर कढ़ाई - लोकप्रिय उत्पादनहरू र विज्ञापन लुगा
एक कढ़ाई बान्कीको साथ पोलो शर्टहरू
कढ़ाईको साथ पहिलो सम्बन्ध? कलरको साथ टी-शर्ट र छातीमा एक सुन्दर ढ emb्गले कढ़ाई लोगो। भव्यता र लगाईएको आरामको संयोजन। मानिसहरूलाई तपाईंको कम्पनी वा संस्थाको लोगोको साथ यस्तो टी-शर्ट लगाउन खुसी बनाउनुहोस्।
कढ़ाई कम्पनी लोगो र शिलालेख संग टी-शर्ट
प्रत्येक दिन लगाउनको लागि तयार छ। तपाईंको कर्मचारीहरू वा ग्राहकहरूलाई तपाईंको लोगो वा तपाईंको कम्पनीका सेवाहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने शिलालेखले छोटो आस्तीन लगाएको तपाईंको ब्रान्डको विज्ञापन गर्न दिनुहोस्।
एक उच्च गुणवत्ताको टी-शर्ट र कम्प्युटर-कढ़ाई बान्की वा शिलालेख एक उत्तम संयोजन हो जसले तपाईंलाई चिनियाँ विज्ञापन टी-शर्टको भीडबाट बाहिर निस्कन अनुमति दिन्छ कम गुणवत्ता र टिकाऊ प्रिन्टको साथ।
एक कढ़ाई बान्कीको साथ स्वेटशर्टहरू
एक क्लासिक हूडीले तपाइँको उत्पादन वा ब्रान्डको विज्ञापन पनि गर्न सक्दछ। तपाइँको पासवर्ड, नाम र / वा लोगो स्वेटशर्टमा एम्ब्रुइड गर्नुहोस्।
ऊनमा कम्प्युटर कढ़ाई
के तपाइँ तपाइँका कर्मचारीहरु न्यानो हुन र एकै समयमा आफ्नो कम्पनीको नेत्रहीन पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ? वा हुनसक्छ तपाईं आफ्नो कम्पनीको लागि उत्कृष्ट गुणस्तरीय प्रमोशनल कपडा सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ? कम्प्युटर कढ़ाई ऊन।
कम्प्यूटर भरतका साथ शर्टहरू
अधिक औपचारिक र सुरुचिपूर्ण? तपाइँका कर्मचारीहरुलाई एक कढ़ाई कम्पनी लोगोको साथ सुरुचिपूर्ण पोशाकमा ग्राहकहरु लाई सेवा प्रदान गर्नुहोस्। शर्टमा कम्प्युटर कढ़ाई छनौट गर्नुहोस्।
छापिएको प्यान्ट र शॉर्ट्स
केवल माथिल्लो कपडा मात्र एक शिलालेख वा ढाँचा embroidering लागि उत्तम छ। प्यान्ट वा शॉर्टमा कढ़ाई अनौंठो प्रमोशनल कपडा सिर्जना गर्न।
क्याप्समा कम्प्युटर कढ़ाई
तपाइँको मनपर्ने टोली, स्नातक विश्वविद्यालय वा ब्रान्ड नामको कढ़ाई लोगो बिना बेसबल टोपी कल्पना गर्न गाह्रो छ। तपाईंको संस्था वा कम्पनीको लोगो बनाउनुहोस् आँखा चिम्ल्याउने। तिनीहरूलाई क्यापमा एम्ब्रोइड गर्नुहोस्।
तौलिए र नुहाउने वस्तुहरू एक कढ़ाई छवि र एक शिलालेख संग
कुनै पनि होटेल र एसपीए भन्दा फरक पार्ने छैन जति धेरै ब्रान्डेड तौंली र बाथरोबहरू। अज्ञात, बोरिंग तौंलीहरू अनौंठो वस्तुमा बदल्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्डको लक्जरीमा जोड दिन्छ। यो तपाईंको लागि प्रतिष्ठा हो, तर तपाईंको पाहुनाहरूका लागि विलासिताको भावना पनि हो।
कम्प्युटर कढ़ाईको साथ ब्यागहरू
कम्पनीको नाम र लोगोको साथ झोलालाई कसरी सजिलैसँग मार्क गर्ने? कम्प्युटर कढ़ाई राम्रो काम गर्दछ। सस्तो र चाँडो, एक साधारण झोला तपाईको कम्पनी को एक विशिष्ट सुविधा मा बदल्न सक्छ।
चेतावनी कपडा र कम्प्युटर कढ़ाई
वर्कवेयरले कम्प्युटर कढ़ाईका लागि वाहकको रूपमा पनि ठूलो काम गर्दछ। नाम, प्रकार्य, कम्पनी नाम र लोगो - सूट वा अन्य विशेष तत्व workwear र उच्च दृश्यता मा कढ़ाई।
कम्प्युटर कढ़ाई - यसको लागत कति छ?
कम्प्युटर कढ़ाई अपेक्षाकृत सस्तो छ। यद्यपि एकल सिलाईको मूल्य निश्चित रूपमा निर्दिष्ट गर्न गाह्रो छ किनकि धेरै प्यारामिटरहरूले यस लागतलाई असर गर्छन्।
कम्प्युटर कढ़ाई ठूला अर्डरहरूको लागि व्यक्तिगत रूपमा सस्तो हुनेछ। मूल्य पनि कढ़ाई गर्नका लागि क्षेत्र को आकार बाट प्रभावित छ, कढ़ाई को प्रकार, सतह मा ढाँचा को घनत्व, प्रति सेमी सुई स्ट्रोक को संख्या।2 सामग्री, साथै स्थानहरूको संख्या जहाँ कढ़ाई वस्तुमा राख्नुपर्दछ।
मूल्य सामान्यतया प्रयोग गरिएको र colors्गको संख्याबाट प्रभावित हुँदैन, किनभने सिलाउने मेसिनमा धेरै थ्रेडहरू छन्।
हामी तपाईंलाई परियोजनाको व्यक्तिगत मूल्यांकन गर्न आमन्त्रित गर्दछौं। कृपया हामीलाई ग्राफिक्स पठाउनुहोस् जुन तपाइँ कढ़ाई गर्न चाहानुहुन्छ र बनाउनु पर्ने टुक्राहरूको संख्याको बारेमा जानकारी।
कम्प्युटर कढ़ाई भनेको के हो?कम्प्युटर कढ़ाई भनेको के हो?जहाँ कम्प्युटर कढ़ाई गर्नकम्प्युटर कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई Białystokकम्प्युटर कढ़ाई बायल्सकोकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई bydgoszczकम्प्युटर कढ़ाई मूल्यकम्प्युटर कढ़ाई मूल्य सूचीकम्प्युटर कढ़ाई यो के होकम्प्युटर कढ़ाई यो के होCzęstochowa को कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई gdańskकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई Gdyniaकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई gliwiceGniezno कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्युटर कढ़ाई कति खर्च हुन्छकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई जस्तो देखिन्छकम्प्युटर कढ़ाई कसरी सुरू गर्नेकम्प्युटर कढ़ाई कसरी बनाउनेकम्प्युटर कब्रिन क्या मेसिनकम्प्युटर कढ़ाई के pkdकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई कलिसकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई katowicekielce मा कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्यूटर भरत कोनिनकोस्जालिनमा कम्प्युटर कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई क्राकोकम्प्युटर डु boat्गा कढ़ाईकम्प्युटर कढ़ाई डु boat्गा मूल्य सूचीकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई लुब्लिनटी-शर्टमा कम्प्युटर कढ़ाईकम्प्युटर कढ़ाई प्याचहरूकम्प्युटर कढ़ाई Nowy Sączकम्प्यूटरीकृत एम्ब्रॉइडरी olztynOpole मा कम्प्युटर कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई pabianiceकम्प्युटर कढ़ाई poznańकम्प्युटर कढ़ाई राडRybnik को कम्प्युटर कढ़ाईरिचको कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई Silesiaकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई SłupskSosnaviec मा कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई swarzędzBristles को कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्युटर कढ़ाई सीइहरूTarnów मा कम्प्युटर कढ़ाईToruń मा कम्प्यूटरीकृत कढ़ाईकम्प्यूटरीकृत कढ़ाई वारसाकम्प्युटर कढ़ाई वारसा मूल्य सूचीकम्प्युटर भर्याई क्रुकाउकम्प्युटर कढ़ाई बान्कीकम्प्युटर कढ़ाई हरियो पहाडकम्प्युटर कढ़ाई लागत कति पर्छकसरी कम्प्युटर कढ़ाई गर्नकसरी कम्प्युटर कढ़ाई मूल्यकस्तो कम्प्यूटर कढ़ाई जस्तो देखिन्छकसरी कम्प्युटर कढ़ाई बनाउनकसरी कम्प्युटर कढ़ाई फाल्नेकसरी कम्प्युटर कढ़ाई डिजाइन गर्नेकसरी कम्प्युटर कढ़ाई बनाउनटी-शर्टहरूप्रिन्टहरूविज्ञापन लुगासिलाई